Janata Samachar - तपाइँले थाहा पाउनु भएको छ ? चीनबारे यी १३ रोचक कुरा
तपाइँले थाहा पाउनु भएको छ ? चीनबारे यी १३ रोचक कुरा
बुधबार, ०८ कार्तिक २०७४
एजेन्सी । सुपर पावरको बाटो रहेको चीनको कमान एक पटक फेरि सी जिनपिङ्गको हातमा पुगेको छ । सी जिनपिङ्ग विस्तारै विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बन्ने बाटोमा छन् ।
आफ्नो देशभित्रै पनि जिनपिङ्गको उचाइ कम्युनिस्ट पार्टीका पहिलो नेता माओत्से तुङ्ग बराबर भएको छ । सी जिनपिङ्ग पुन नेतृत्वमा पुगेपछि अहिले विश्वको ध्यान चीनमा छ । डोनाल्ड ट्रम्प उदाएपछि अमेरिकामा लडखडाइरहँदा चीन सीको नेतृत्वमा सुपर पावर बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
४) चीनमा बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण त्यहाँ शुद्ध हावाको क्यान बेच्न थालिएको छ। शुद्ध हवा पाँच युआन प्रति क्यान बेच्ने गरिएको छ। शुद्ध हावा तीन प्रकारका छन् । १) 'तिब्बतको असली हावा', २) क्रान्तिकारी याहयान र, ३) पोस्ट-इन्डस्ट्रियल ताइवान ।
२०७४ कार्तिक ०८ गते १८:०६ मा प्रकाशित
896 पटक पढिएको